कम उमेरमा नै अनुहारमा किन देखिन्छ चाउरी ?
चेरवन्त खबर डेस्क उमेर बढेसँगै शरीरको छालामा आउने परिवर्तनलाई स्वाभाविक रुपमा लिइन्छ । तर, उमेर नपुग्दै जवानीमा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने यो चिन्ताको विषय बन्न पुग्छ । जवानीमा नै अनुहारको छाला चाउरीने, अनुहारमा काला धब्बा बस्नु भनेको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिने समस्या हो । अनुहारमा चाउरीपना, थकान, भारी सामान उठाउन समस्या, कपाल झर्ने समस्या […]
चेरवन्त खबर डेस्क चिसो मौसम धेरैलाई मनपर्छ । तर केही मानिसका लागि यो मौसमले धेरै नै समस्या निम्त्याउने गर्छ । चिसो मौसममा केही मानिसको हात र खुट्टा सुन्निने गर्छ । चिसो धेरै बढ्दा यो समस्या थप बढ्न थाल्छ । वास्तवमा चिसो मौसमको प्रभावले शरीरका केही नसा खुम्चिने गर्छ । यसको असर रक्तसञ्चारमा पनि पर्ने गर्छ […]
बिहान खाली पेटमा मेथी भिजाएको पानी सेवनले मधुमेह देखि पेट सम्बन्धी समस्यामा फाइदा
चेरवन्त खबर डेस्क मेथीबाट तरकारीदेखि लड्डुसम्म विभिन्न परिकारहरु निर्माण हुन्छन् । मेथीको सेवनले धेरै रोगहरु घरमा नै बसीबसी निको समेत हुन्छ । मेथीमा विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरु पाइन्छन् । र यसमा मिनरल्स पनि हुन्छ । यसलाई कस्मेटिकको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बिहान सबेरै उठेर मेथी भिजाएर निकालेको पानी पिउँदा शरीरको दूषित तत्वहरु बाहिर निस्किन्छ […]
प्रकाशित मिति: २०७८ पुष, ११ प्रकाशित मिति: २०७८ पुष, ११ by चेरवन्त खबर
चेरवन्त खबर डेस्क राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकमा निहित ज्ञान, सीप र अनुभवको पुस्तान्तरणका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरी सामूहिक प्रयास गर्न सम्वद्ध सबैमा आग्रह गरेकी छन् । प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, २०७८ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट आरक्षण, […]
चेरवन्त खबर डेस्क बारा– सानै उमेरमा रोजगारीको लागी राजधानी काठमाण्डौं हुईकिएका ५८ वर्षिय राजेश यादव अहिले आफन्तको खोजीमा कलैयामा भौतारीरहेका छन । गरीबीले थलिएको परिवारको पीडा सह्न नसकेर उनी आज भन्दा करीब ५० वर्ष अगाडी बुआ र दुई दिदीबहिनीलाई घरमै छाडेर राजधानी हुईकिएका थिए । आमा बितेपछि घरमा बढेको किचलोको कारण करीब ८ वर्षको उमेरमा […]
शरीर स्वस्थ छ सबै छ, स्वस्थ छैन केही छैन
नियमित योग र ध्यानमार्फत जीवन शक्तिको विकास हुन्छ। यसबाट शरीरका ८० प्रतिशत रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ रोगी भएपछि अझ एकपछि अर्को रोग थपिँदै गएको बेला थाहा हुन्छ, ‘शरीर स्वस्थ ठिक छ सबै छ, स्वस्थ छैन केही छैन।’ जो बिरामी भयो, पीडा उसैलाई थाहा हुन्छ। हो, यो जगत्मा स्वास्थ्यजस्तो अर्को महŒवपूर्ण चिज केही छैन। अहिले शरीरमा […]
प्रकाशित मिति: २०७८ पुष, ७ प्रकाशित मिति: २०७८ पुष, ७ by चेरवन्त खबर
के हो ‘साइलेन्ट हर्ट अट्याक’ ? कसरी थाहा पाउने ?
चेरवन्त खबर डेस्क हर्ट अट्याकको संकेत दिने लक्षणहरु फरक प्रकृतिका हुन्छन् । छाती दुख्ने, चिसो लाग्ने, पसिना आउने र धेरै कमजोर महसुस हुने जस्ता लक्षणहरुले हृदयाघातको संकेत गर्छ । तर, कहिलेकाँही लक्षण नदेखिए पनि हृदयाघात हुनसक्छ । कहिलेकाँही मुटुमा समस्या भएको हुने तर थाहा नहुने पनि हुनसक्छ । यस्तो हुनुलाई ‘साइलेन्ट हर्ट अट्याक’ भनिन्छ । […]
बाराको कोल्हबी स्थित अनुप दिपनी माध्यामिक विद्यालयमाबाट अवकाश पाएका तिन शिक्षकको बिदाई
नविन चौधरी, कोल्हबी बारा जिल्लाको कोल्हबी नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित अनुप दिपनी माध्यामिक विद्यालयमाबाट अवकाश पाएका तिन जना शिक्षकहरुको एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भब्य रुपले बिदाई गरेका छन् । उक्त बिद्यालयका प्रमुख प्रचार्य रामप्रसाद चौधरीको सभापतित्वमा र बिद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा कोल्हबी नगरपालिका वडा नम्बर १ का सदस्य अजय साहको प्रमुख आतिथ्यमा सो […]
जीवनशैली, शिक्षा, समाचार
प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर, १७ प्रकाशित मिति: २०७८ मंसिर, १७ by चेरवन्त खबर
सागर घोरसाईने, कोल्हवी बारा जिल्लाको पथलैया स्थित कृष्ण युवा क्लबले अवसर कहिले काहीँ ढोका ढकढकाउँछ त्यसैले यसलाई जान नदिनुहोस र रक्तदान गर्नुहोस भन्ने मुल नाराका साथ बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त क्लबका अनुसार १ बजे सो कार्यक्रम सफलताका साथ जितपुरसिमरा १ स्थित पथलैया सिटिराईड बसपार्कमा सम्पन्न भएको हो। रक्तदान कार्यक्रममा २ जना […]
जुगवामा आयोजित प्रथम सुवास चौधरी स्मृति जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल सम्पन्न
प्रकाशित मिति: २०७८ कार्तिक, २८ प्रकाशित मिति: २०७८ कार्तिक, २८